“သံလွင်ကို အိပ်မက်တဲ့အခါ ငါတို့ရဲ့ တေးသွားကိုကြားလိမ့်မယ်” [Official Blog of Thanlwin Ainmat]
သံလွင်အိပ်မက် အတွဲ(၂) အမှတ် (၂)အတွက် စကားဝိုင်း
သံလွင်အိပ်မက် အတွဲ(၂) အမှတ် (၂)တွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုမည့် သံလွင်အိပ်မက်စကားဝိုင်းကဏ္ဍအတွက် အောက်ပါအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၂၀၀၈ ဇွန်လ ၁၅ရက် မတိုင်မီ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
“မြန်မာပညာတတ်တွေ ပြည်ပထွက် အလုပ်လုပ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်”
Posted by ThanlwinAinmat at 4/17/2008 12:13:00 AM7comments
သံလွင်အိပ်မက် အမှတ် (၁၂)အတွက် စကားဝိုင်း
သံလွင်အိပ်မက် အမှတ် (၁၂)တွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုမည့် စကားဝိုင်းကဏ္ဍအတွက် အောက်ပါအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၂၀၀၇ စက်တာဘာလ ၁၅ရက် မတိုင်မီ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
“ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းဟာ မြန်မာလူငယ်တွေ အကြားမှာ အတော်ရေပန်းစားလာနေပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ဖတ်ခြင်း၊ ရေးခြင်းဟာ အချိန်ကုန်စေတယ်။ စိတ်ကူးပေါက်ရာတွေကို လျှောက်ရေးနေကြတာပဲလို့ တချို့က မြင်ကြပါတယ်။ စာဖတ်သူကရော ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ”
Posted by ThanlwinAinmat at 7/23/2007 09:48:00 PM 15 comments
သံလွင်အိပ်မက် အမှတ် (၁၁)အတွက် စကားဝိုင်း
သံလွင်အိပ်မက် အမှတ် (၁၁)တွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုမည့် စကားဝိုင်းကဏ္ဍအတွက် အောက်ပါအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၂၀၀၇ ဇွန်လ ၁၅ရက် မတိုင်မီ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
“ကိုသံလွင် မြန်မာပြည်ပြန်စဉ်က ဆယ်တန်းအောင်ပြီးစ လူငယ်လေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်။ အမှတ်ပေါင်းကလည်း ကောင်းနေတော့ ကြိုက်တဲ့လိုင်း ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းမသိဘူး ဖြစ်နေတယ်။ သူဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ ကူညီပြီး အကြံပေးကြပါဦး”
Posted by ThanlwinAinmat at 4/12/2007 05:16:00 PM 12 comments
"Are we burmese youth not clever enough?"
မြန်မာလူငယ်တွေ ညံ့ကြပါသလား ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြင်ဖလှယ်ကြရအောင်
Let's discuss together and share your opinions in this blog.
Feel free to express your view in the comments.
We'd be using that for our upcoming issue 10, April 2007.
Posted by ThanlwinAinmat at 1/16/2007 11:40:00 PM 14 comments
Our thanlwin ainmat e-zine issue9has been released on 16/01/2007 @ 11pm.
Enjoy reading @ http://www.thanlwin.com/thanlwinainmat/issue9
Feel free to leave comments about issue9in this post.
Posted by ThanlwinAinmat at 1/16/2007 11:36:00 PM0comments
Discussion on how you would help your people and nation if you were givenachance to do so
"How would you help your people and nation if you were givenachance to do so?"
We'd be using that for our upcoming issue 9, Jan 2007.
Posted by ThanlwinAinmat at 10/21/2006 05:42:00 PM 27 comments
Have your say about whether overseas burmese should take up another citizenship!
Let's discuss and share with us how u feel about it in this blog.
Feel free to voice out ur view in the comments.
We intend to use it for our upcoming issue 8, Oct 2006.
Posted by ThanlwinAinmat at 7/24/2006 12:16:00 AM 40 comments